Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Everton… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 08 Maarso 2021. Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Everton, kaddib markii ay kaga adkatay 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda kubadda cagta Chelsea.
Daqiiqadii 31-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga naadiga Everton ee Ben Godfrey, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 1-0 ay ku hoggaamineysay Blues.
65 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Chelsea ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta, kaddib markii rigoore loo dhigay uu gool u badelay xiddigooda khadka dhexe ee Jorginho, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 2-0.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay kag adkaatay Chelsea kooxda Everton oo ku soo booqatay garoonka Stamford Bridge, Blues ayaa hadda fadhisa booska 4-aad ee kala sareynta horyaalka, kaddib markii ay uruursatay 50 dhibcood.